China Fithem ks-020 ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့နားကြပ်သူဌေးသားလှေအပန်းဖြေအားကစားနားကြပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Kaiwansi
ဒီ ks-020 ကို bk: 3200 chip နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး Bluetooth version ကတော့ 5.0 ပါ။ ရေစိုခံအဆင့် IPx5 ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှေအတွက် OEM ဖြစ်သည်။
2. Fithem ကုန်ပစ္စည်း parameter သည်မိတ်ဆက်စကား
Fithem ထုတ်ကုန်များ၏ ၃
သေးငယ်။ သယ်ဆောင်နိုင်သော၊ အဆင်ပြေသည့်နားကြပ်များကိုသံလိုက်လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရိုးရာနားကြပ်ပုံစံများကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးမည်မဟုတ်။
4. Fithem ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ကို
၅. နောက်ဆုံးပေါ် Bluetooth 5.0 ဗားရှင်းကို သုံး၍ SBC, AAC နှင့် Aptx အရည်အသွေးမြင့်သော coding protocol ကိုထောက်ပံ့သည်။ BUILT-IN 110MAH အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီသည်အားအပြည့်သွင်းနိုင်သည့်အနေအထားတွင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဂီတ ၁၃ နာရီအထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုရှင်းလင်းသောခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးရရှိရန်နှင့်ဖုန်းကိုမလွဲ that အောင်သေချာစေရန်အတွက်ဖုန်း၏တုန်ခါမှုလည်ပတ်မှုလည်ပတ်မှုအထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်။
၆။ CONTROL ASPECT: စာနယ်ဇင်း add သည်အသံကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ တေးဂီတကိုခေတ္တရပ်ရန်အလယ်ထိန်းချုပ်မှုသော့ကိုသုံးနိုင်သည်။ Middle Control အနေအထားသည်ရေစိုခံနိုင်သောကြောင့်ရာသီဥတုကြောင့်လည်းထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ ရုပ်သွင်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အသံစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကအမှန်တကယ်တွင်အလွန်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသည့်ခံစားမှုမျိုးကိုပြသနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းအသံအရည်အသွေးသည်အလွန်လှပသည်။
၇။ ဈေးနှုန်းသည်တူညီသောဈေးနှုန်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးနားကြပ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအချိုးသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ထုတ်ကုန်တွင် ALIBABA အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းအရောင်းနှင့်အမှာစာများရှိသည်။ user အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အများဆုံးအပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ သို့မှသာရုပ်သွင်သွင်ပြင်၊ ဝတ်ဆင်မှု၊ ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အသံအရည်အသွေးများသည်သိသာသောဘုတ်အဖွဲ့ကိုမရွေးချယ်နိုင်၊ စျေးကွက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ခရီးသည်ကုန်ပစ္စည်းများ။
ရှေ့သို့ Fithem ks-016 ကြိုးမဲ့စတီရီယိုလည်ပင်းကြိုး bluetooth Chip 5.0 အားကစားနားကြပ်
နောက်တစ်ခု: Fithem Ks-816 ကြိုးမဲ့နားကြပ် tws နားကြပ် - low treble headset ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်သည်
Fithem ks-011b ရေစိုခံဂီတကြိုးမဲ့ blueto ...
Ks-008 fithem ရေစိုခံဂိမ်းကစားခြင်းကြိုးမဲ့ blueto ...
Ks-012 fithem gaming အားကစားကြိုးမဲ့နားကြပ် ...